Lineker: Barcelona waxaa Garoonka u gala wax ka badan 13 laacib, ma Garsoorka ayuu ula jeedaa mase wax kale ayaa jira???
Thursday, January 24th, 2019 - 10:06:36
Thursday February 08, 2018 - 02:09:46 in Wararka by Muuse Cabdi
Gary Lineker ayaa sheegaya in kooxda Barcelona waqtiyadaan ku ciyaareyso hannaan lala yaabay isla markaana uuba isagu u aqoonsanyahay kooxdii, 13-ka laacib inta Lionel Messi uu garoonka ugu jiro.
Inta lagu gudajiray 3 sano oo uu ka shaqeynayay Spain, Lineker ayaa dhaliyay 42 gool 103 kulan oo uu LaLiga uga ciyaaray kooxda Blaugrana wuxuuna noqday laacibka British-ka ah ee ugu goolasha Badan taariikhda, ka hor inta uusan dhaafin Gareth Bale.
"Waan jeclahay Barcelona," Lineker ayaa u sheegay Lobo Carrasco isagoo wareysi siinayay Mundo Deportivo. "Waan daawadaa dhammaan kulamada; waxaan taageersanahay Barcelona Sidoo kale 4 anigu aan dhalay wey taageeraan.
"Barcelona waxay aheyd markeedii ugu wanaagsaneyd tan iyo Ronaldinho, Xavi, [Andres] Iniesta iyo ninka dhammaan ka sarreeya, Messi.
"Messi waa nin ka yimid duni kale."
Weeraryahankii hore ee England ayaa ku sheegay wiilka reer Argentine in uu yahay laacib kaligiis 3 u dhigma, sidaas awgeed ayuu yiri Barcelona waxay ku ciyaartaa 13 Laacib kulan walba oo uu safanyahay.